Adeegga Macaamiil ee Liita ayaa wax u dhimaya Suuqgeyntaada ROI | Martech Zone
Adeegga Macaamiil ee Liita ayaa wax u dhimaya Suuqgeyntaada ROI
Saturday, April 9, 2016 Axad, Sebtembar 19, 2021 Douglas Karr
Jitbit, Barxad miis caawimaad leh, ayaa soo saartay muuqaalkan oo tirakoob ah oo si cad u sawiraya saameynta adeegga macaamiil liita ee ganacsiga. Shirkaduhu waxay sii wadaan inay ula dhaqmaan adeegga macaamiisha oo liita sidii ay yeeli jireen sanado ka hor… markii macaamiisha ay u cawdeen oo keliya ganacsiga ama koox yar oo saaxiibadood ah Laakiin taasi maaha xaqiiqda adduunka ee aan hadda ku nool nahay.
Macaamiisha careysan waa dilaa aamusan
Adeegga macaamiisha oo liita wuxuu hoos u dhigaa sumcadda sumcaddaada khadka tooska ah wuxuuna si toos ah u saameeyaa soo celinta suuqgeyntaada maalgashiga. Haddii aad ku heshay bog shey oo khadka tooska ah ku dhex jira oo ay ku hoosjiraan dib u eegisyo liita hoostiisa, kuwa wax iibsanaya waxay u socotaa inay iska tagaan. Xaqiiqdii, 86% dadka soo booqda kama iibsan doonaan shirkad leh dib u eegis taban.
Si loo hagaajiyo guud ahaan adeegga macmiilkaaga, JitBit wuxuu ku talinayaa in shirkaduhu hagaajiyaan is -dhexgalka shaqaalaha adeegga iyo macaamiisha, siiyaan tababar wanaagsan si looga fogaado shaqaalaha aan kartida lahayn, iyo inay bixiyaan khibrad joogto ah dhammaan kanaallada adeegga macaamiisha - oo ay ku jiraan labada taleefan, emaylka, wada sheekaysiga tooska ah, golayaasha , riix-to-call taageero, iyo xataa baraha bulshada. Waxay faahfaahinayaan 11 Dariiqo Adeegga Macaamiisha Xun Ayaa U Gubaya Khadkaaga Hoose boostadooda:
Fursad la’aan - ganacsiyada waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwa la gaari karo oo wax ka qabta dhammaan kanaallada.
Speed - ma jiraan wax niyad jabiya macaamilka sida sugitaanka caawimaad.
Aqoonta - wakiilada adeegga ee aan caawin karin ayaa ka baxsan jahwareerka.
Argagixisada - isku dayga inaad ku guuleysato dagaalka ayaa ku riixaya ganacsiyada inay ku guuleystaan ​​dagaalka.
Balanqaadyo - jebinta ballamaha ayaa kala baxa kalsoonida, badhkoodna shirkadaha oo dhan waxay buriyaan ballamaha.
Records - wicitaanada soo noqnoqda iyo sharraxaadda dhibaatada marwalba marwalba waxay macaamiisha u keentaa nuts.
waxkabadalka - inaad garan weydo qofka macmiilkaagu yahay, qiimahooda, qibradooda, iyo waxyaabaha ay filayaan waxay ka tagaysaa shirkadaha gadaal.
Dhagaysiga - inaad ku celceliso dhibaatada marar badan waa mid aan loo baahnayn waxayna hoos u dhigeysaa heerka qanacsanaanta.
La Soco - markaad dhahdo waan ku daba soconaa, dabagal ku samee.
Shaqaalaha Xun - si kasta oo ay u xumaadaan shaqaalahaaga maalin kasta, ma jirto sabab aad taas uga saarto macaamiisha xigta.
Hareeraha Ka Bax - wareejinta iyo daahid la'aanta xalka ayaa ah waxa ugu xun ee aad ku sameyn karto macaamiil.
Qeybta hoose ee sawir-gacmeedkan? By 2020, khibrada macmiilka dhaafi doona qiimaha iyo wax soo saarka sida muhiimka ah kala duwanaanshaha sumadda. Noocyo badan ayaa horeyba u jiray, feker ahaanteyda. Ganacsiyadu waxay baranayaan in macaamiisha aan ku qanacsanayn ay marar dhif ah dib ugu soo laabtaan, badankooduna marna dib uma isticmaalin shirkadda. Isku dar iyada oo xaqiiqda ah in macaamiisha aan dhergin ay si fudud ula wadaagi karaan jahwareerkooda internetka, ganacsigaaguna wuxuu u socdaa dhibaato haddii aadan ka jawaabin oo aadan saxin dhibaatooyinka la sheegayo. Shirkado badan ayaa ula macaamila adeegga macaamiisha shar shardi ah marka ay tahay inay maal gashadaan iyada oo ay uga duwan tahay tartamayaasheeda.
Tags: adeegga macaamiisha oo xunkhibrada macmiilkaAdeegga macaamiishaadeegga macaamiisha roitirakoobka adeegga macaamiishahelpdeskinfographicjitbitdib u eegista xunadeegga macaamiisha oo liitaReviewsROI
Habka ugu wanaagsan ee loo maareeyo akoonno badan oo Twitter ah